Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited (oo loo soo gaabiyo Anbotek, Stock code 837435) waa qayb dhammaystiran, madax-bannaan, awood-baaris ah oo dhinac saddexaad ah oo tijaabisa shabagyada adeeg ee dalka oo dhan. Qaybaha wax soo saarka adeegga waxaa ka mid ah Internetka Waxyaabaha, 5G / 4G / 3G alaabada isgaarsiinta, gawaarida casriga ah iyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin, tamarta cusub, agabyada cusub, aerospace, gaadiidka tareenka, difaaca qaranka iyo warshadaha milatariga, sirdoonka macmalka ah, bii'ada deegaanka iyo iwm. adeegyada farsamada iyo xalalka tijaabinta, shahaadeynta, ka takhalusida, cilmi baarista caadiga ah iyo horumarinta, iyo dhismaha shaybaarka ee machadyada, macaamiisha sumadaha leh, kuwa wax iibsada ee shisheeyaha ah iyo kuwa ka ganacsada e-commerce. Sida tijaabada magaalada Shenzhen iyo shahaadada adeegga adeegga tikniyoolajiyadda dadweynaha ee Tamarta Cusub, Waxtarka Tamarta Laydhka, Kan sameeyey, Ganacsiga Dibadda, Alaabada Elektarooniga ah iyo Internetka Waxyaabaha. Anbotek wuxuu kasbaday kalsoonida in kabadan 20,000 oo macaamiil shirkadeed ah adeegyo tayo sare leh mudo 15 sano ah. Sannadkii 2016, Anbotek wuxuu si guul leh ugu liis gareeyay Xuquuqda Qaranka iyo Xuquuqda Isweydaarsiga (oo loo soo gaabiyo NEEQ) wuxuuna ahaa machadkii ugu horreeyay ee tijaabinta ee Shenzhen oo lagu qoro NEEQ.
Anbotek waxaa aqoonsaday CNAS, CMA iyo NVLAP （shaybaarka lambar 600178-0）, oo ay aqoonsan yihiin CPSC, FCC, UL, TUV-SUD, TUV Rheinland CBTL, KTC iyo hay'ado iyo ururo kale oo caalami ah oo caan ah. Anbotek waa sheybaar CCC iyo CQC loogu talagalay. Warbixinta imtixaanka iyo shahaadooyinka waxaa aqoonsan in ka badan 100 waddan iyo aagag ay ku jiraan USA, UK iyo Jarmalka iyo iwm. Anbotek waxay leedahay aqoonsi ay ku bixiso xog dhexdhexaad ah. Natiijooyinka imtixaanka iyo warbixinnada adduunka ayaa laga aqoonsan yahay.
Tirada guud ee macaamiisha
Saldhig iyo shaybaar
Shaqaalaha Anbotek waxay u doodaan daacadnimada waxayna tixgeliyaan daacadnimada mabaadii'da aasaasiga ah. Shaqaalaha Anbotek waxaa ka go'an inay bixiyaan macluumaad iyo warbixinno cilmiyeysan oo sax ah.
Shaqaalaha Anbotek waxay leeyihiin ujeedo isku mid ah, ficil isdaba-joog ah, iyo is-taageerid Shaqaalaha Anbotek way wada shaqeyn doonaan si loo gaaro hadafka.
Shaqaalaha Anbotek waxaa ka go'an inay abuuraan qiime ayna soo saaraan xalal tikniyoolajiyadeed oo cusub oo loogu talagalay baahida suuqa. Anbotek wuxuu hiigsanayaa safka hore ee horumarinta tikniyoolajiyadda cusub iyo ilaalinta hoggaanka tikniyoolajiyadda.
Shaqaalaha Anbotek waxay fiiro gaar ah u leeyihiin baahiyaha shaqaalaha, waxay ula dhaqmaan lamaane kasta daacadnimo, dadka Ambo waxay diiradda saaraan baahida macaamiisha waxayna u adeegaan macaamiisha tikniyoolajiyad xirfadeed.
Dadka Anbotek waxaa ka go'an inay dhisaan urur waxbarasho iyo is-hormarin. Dadka Anbotek waxay si wadajir ah ula koraan macaamiisha iyo shirkadaha si ay u gaaraan is-qiimaynta.
Anbotek · Aragtida
Noqo hogaamiyaha ugu ixtiraamka badan imtixaanka maxalliga ah ee Shiinaha iyo warshadaha shahaadooyinka
Xirfad ahaan xallinta dhibaatada wareegga shahaadada sheyga ee Shiinaha
U abuur qiime macaamiisha isla markaana la abuuro dhalaal shaqaalaha
Anbotek · Howlgalka
Si loo ilaaliyo caafimaadka iyo badbaadada aadanaha, ilaalinta deegaanka, keydinta tamarta iyo adeegga
U fidiso adeeg hal-joogsi ah macaamiisha dhinacyada baaritaanka, aqoonsiga, tijaabinta iyo shahaadaynta
• Shenzhen Satellite TV Station "SPOT NEWS" ayaa baahisay barnaamijka "filimka taleefannada gacanta"
• Duqa magaalada iyo hogaamiyaasha kale ee magaalada Changsha waxay booqdeen Hunan Anbotek.
• The Nanfang Daily ayaa daabacday maqaal gaar ah oo ku saabsan "Anbotek Streverser servers for the quality of Shenzhen special zone zone".
• Anbotek wuxuu mar kale maray US NVLAP (FCC accreditation) qiimeynta goobta mar labaad.
• Anobek wuxuu ku guulaystay cinwaan sharafeedkii 6aad ee Shenzhen Sumcadda Caanka ah.
• Wuxuu Noqday Xarunta Shahaadada Tayada Shiinaha CQC Sheybaar qandaraasle ah.
• Waxaa sharfay Shenzhen Guddiga Sayniska iyo Teknolojiyada Cusboonaysiinta Adeegga Farsamada ee Istaraatiijiyada Adeegga Farsamada.
• Waxaa sharfay Shenzhen Komishanka Sayniska iyo Teknolojiyada Nidaamka Awoodda Tamarta Gawaarida Cusub ee Tijaabinta Barnaamijka Adeegga Teknolojiyada Dadweynaha.
• Hunan Anbotek waa la aasaasay oo waxaa la galiyay hawlgal wax ku ool ah, Anbotek wuxuu bilaabay inuu soo galo goobta baaritaanka deegaanka.
• Adeegyada farsamada ee Anbotek waa la diiwaan galiyay waxayna furteen baal cusub qaybta adeegga sheybaarka ee Anbotek.
• Ku guuleystey "hay'adda tijaabada saddexaad ee ugu kalsoon ee Shiinaha" ee Ururka Maareynta Tayada elektaroniga ee Shiinaha.
• Anbotek Shenzhen wuxuu ku guuleystey sharafka shirkadaha qaran ee farsamada sare.
• Shirkado ka tirsan kooxda qalabka-Zhongjian oo ku guuleystay abaalmarinta shirkadda farsamada sare ee qaranka.
• Si guul leh loogu taxay Isweydaarsiga Qaranka iyo Sheegashada (NEEQ), koodhka kaydka: 837435.
• La siiyay Abaalmarinta lammaanaha ugu wanaagsan sanadka ee Koonfurta Shiinaha ee TUV SUD Group 7 sano oo xiriir ah.
• Shenzhen Sayniska iyo Teknolojiyadda Cusboonaysiinta Sameeyaha Adeegga Adeegga Sharafta.
• Mideynta iyo helitaanka shirkadda qalabka Zhongjian, adeegyada wax soo saarka ee ku lug leh qalabka lagu kalsoonaan karo deegaanka R & D iyo wax soo saarka.
• Helay shahaadada shaybaarka CCC oo ay maamusho Maamulka Shahaadada Qaranka iyo Aqoonsiga.
• Waxaan ka helay sharafta lammaanaha ugu wanaagsan KTC Korea.
• Waxay heshay sharaftii Shenzhen Dhaqaalaha iyo Ganacsiga Guddiga Sayniska Adeegga Ganacsiga Dibadda.
• Barmaamijka Adeegga Tijaabinta Batariga Tamarta iyo Shahaadada Adeegga Cusbooneysiinta waxaa ku dhawaaqay Shenzhen Science Innovation Committee Sayniska iyo Adeegga Teknolojiyada. Mashaariic cusub oo loogu talagalay faallooyinka dadweynaha.
• Waxa la aasaasay Dongguan Anbotek.
• Waxay ku guuleysteen sharaftii shirkadda farsamada sare ee qaranka.
• Wax soosaarka nalalka LED-ka waxtarka tamarta iyo waxqabadka iftiinka madasha adeegga tikniyoolajiyadda bulshada ayaa ku guuleystey sharafta urur soo-saarka iyada oo ay ku guuleysatay Xafiiska Sayniska iyo Teknolojiyada Degmada Nanshan.
• Guangzhou Anbotek waa la diiwaangeliyey lana aasaasay.
• Ningbo Anbotek waa la diiwaangeliyey lana aasaasay.
• Waxaa sharfay Sanduuqa Hal-abuurka Teknolojiyada ee SME ee Wasaaradda Sayniska iyo Teknolojiyadda.
• sharafta sanadlaha ah ee lammaanaha ugu fiican TUV SUD Group South China.
• Imtixaanka sheybaarka elektiroonigga ah iyo shahaadeynta adeegga dadweynaha ayaa ku guuleystay sharaftii Sanduuqa Innovation Technology ee SME ee Wasaaradda Sayniska iyo Teknolojiyada.
• Waxay heshay oggolaanshaha hay'adda KTC ee Kuuriya, oo mugga ganacsiga ee KC ayaa ku jira kaalinta koowaad ee warshadaha.
• Anbotek Pengcheng waxaa laga diiwaangeliyey oo laga aasaasay degmada Shenzhen Baoan.
• Waxaa markii ugu horaysay la aqoonsan yahay CNAS (Shahaadada No.: L3503) waxayna ahayd shaybaarkii ugu horeeyey ee gaar loo leeyahay ee helay aqoonsigan.
• Markay ahayd May 27, 2004, aasaasihii shirkadda, Mr. Zhu Wei, wuxuu aasaasay Tijaabada Anbotek ee Shenzhen Nanshan Science and Technology Park.